Posted by PhyoPhyo at Wednesday, July 17, 2013 Labels: အထွေထွေမှတ်စု, မေမေ့ရဲ့စာ
ဇူလိုင်လ ၁၉ရက် စနေနေ့သို့ ရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ။အနှစ် ၆၆ ပင် တိုင်ခဲ့သော်လည်း ပြည်သူတို့ကား မမေ့။
ယင်းနေ့ကို အာဇာနည်နေ့ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်ကြီးများ မသမာသူတို့၏ လက်ချက်ဖြင့် သွေးမြေကျသည့်နေ့ဟုဆိုက မမှားပေ။
အချိန်က နံနက်၁၀နာရီ ၃၇မိနစ်။ မိုးက တစိမ့်စိမ့်ရွာနေသည်။
မှုံမှုိင်းသော ကောင်းကင်ကြီးအောက်ဝယ် လောကသည် ထုံထိုင်းနေဟန်။
ထိုနေ့က ဗိုလ်ချုပ်သည် ထူးထူးခြားခြား သနပ်ခါးရောင် ဘန်ကောက်လုံခြည်နှင့် မန္တလေး ပိုးတိုက်ပုံအင်္ကျီကို စမတ်ကျကျ ၀တ်ဆင်ကာ ဆံပင်ကိုလည်း သေသပ်ကျနစွာ ဖီးသင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နှင့် သမီးထွေးလေး “မမစု" ကိုယုယစွာ နမ်းရှုပ်နှုတ်ဆက်ပြီး အိမ်မှထွက်လာခဲ့သည်ဟု သူ၏ အပါးတော်မြဲ ဗိုလ်ထွန်းလှ (စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ်နေ၀င်း ) က မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကို စည်းဝေးခန်းမရှိ သဘာပတိ ထိုင်ခုံတွင် နေရာချထားပြီးမှ သူ့ရုံးခန်းသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်ထွန်းလှက ဆို၏။
ထိုအစည်းအဝေးတွင် ဘရင်းဂန်းအလက် ၂၀၀ ပျောက်ဆုံးသည့်ကိစ္စကို ဆွေးနွေးရန်ရှိသည် ဆို၏။
သို့သော်လည်း ရန်သူက လက်ဦးသွားခဲ့ပြီတည်း။
ဗိုလ်ချုပ်နှင့် ၀န်ကြီးများ အတွင်းဝန်ရုံးတွင် စည်းဝေးစတင်နေပြီ။
ရုံးရှေ့ကို ဂျစ်ကားတစင်း တည်ငြိမ်စွာ ထိုးဆိုက်လာ၏။ ကားပေါ်မှ စစ်ဝတ်စုံနှင့် လက်နက်ကိုင် တစု အိနြေ္ဒရရ ဆင်းလာသည်။
၀န်ကြီးများစည်းဝေးထိုင်ရာ ရုံးခန်းအတွင်းသို့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ၀င်ရောက်သွားကြပြီ။ မကြာမီ ..
ဒိန်း…ဒိန်း….ဒိန်း….ဒက်..ဒက်..ဒက်…ဒိုင်း ..ဒိုင်း ဒိုင်း ..ဟူ၍ သေနတ်သံများ ပေါက်ကွဲ ဆူညံစွာ ဆက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာ၏။
စည်းဝေး ခန်းမကြီး တခုလုံး ယမ်းနံ့ ဖြင့် မွန်းကြပ်ကာ ယမ်းငွေ့ မျာဖြင့် ပိန်းပိတ် ရီမှောင်သွားခဲ့။
မတ်တတ်ရပ် လက်ကာပြရင်း တခုခု ပြောလိုက်သော ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်သို့ သေနတ်ကျည်ဆန်အတောင့် (၁၃တောင့်) က တဆက်တည်း စုပြုံဝိုင်းအုံ ထွင်းဖေါက် ၀င်ရောက်သွားသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကို အဓိက ပြစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်ခြင်း။
ဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်မှ ထွက်ကျလာသည့် ရဲရဲနီစွေးသော သွေးတို့သည် ခန်းမကြမ်းပြင်သို့ ချောင်းသဖွယ် ယိုစီးရင်း ဗိုလ်ချုပ်ခန္ဓာကိုယ်က အလဲလဲ အပြိုပြို နှင့် ပက်လက်လန်ကျသွားတော့သည်။ လျှပ်တပြက် အသက်ဝိညာဉ် ကင်းမဲ့သွားသည့် ဗိုလ်ချုပ်ခန္ဓာကိုယ်သည်ကား မလှုပ်မယှက်။
သွေးအိုင်တွင်းဝယ် ထာဝရ အိပ်စက်ခြင်းဖြင့် အနားယူ သွားခဲ့ရော့ထင့်။
တတိုင်းတပြည်လုံး အုံးအုံးကြွက်ကြွက်၊ အထက်ဘ၀ဂ်မှ အောက်နရက်တိုင် ငရဲပွက်သို့ ရဟန်းရှင်လူ သူသူငါငါ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားကြကုန်၏။ ဤမျှ ရက်စက် နိုင်လွန်းသည့် ဖြစ်ရပ်ကို မည်သူတွေ ကျူးလွန်ဝံ့သနည်း။ (အဖြေက ရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။)
“ဘယ်ရှေးကံငယ် ဖန်နိုင်အားရက်တယ် …နတ်မင်းတို့ နေနိုင်တယ်” ဟုသာ ငိုချင်းချရပေတော့မည်။
ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အတူ ဦးဘ၀င်း၊ မန်းဘခိုင်၊ စပ်စံထွန်း၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘချို၊ သခင်မြ၊ ဦးရာဇတ်၊ ဦးအုံးမောင်၊ မောင်ထွေးတို့သည်လည်း အတုံးအရုံး ကျဆုံးခဲ့ကြသည်။
နှစ်လနာရီ ..ချိန်ရာသီ ရွေ့ပေမဲ့ ..အာဇာနည်နေ့ကိုတော့ …မမေ့သင့်ပါသလေ..
ယနေ့ဖြင့် ..အသိတရား ရဖို့ အခြေ … .တွေးရှုကာပဲ အလေးပြု ပါတယ်လေ..။
(အလေးပြုနေရုံဖြင့် မပြီးသေးပါ။ တဲ့။ နောင်လာနောက်သားများအတွက် အာဇာနည်စိတ်ဓါတ် ပွားများလာစေရန် တိုင်းပြည်အတွက် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံယူချင်စိတ် ပေါ်ထွန်းစေရန် အမှတ်တရ ကျောက်တိုင်များစိုက်ထူပေးဖို့အာဇာနည်ကုန်းကို ယခုထက် ခမ်းနားစွာ ပြုပြင်မွမ်းမံပေးဖို့ အများကြီး လိုအပ်နေပါသေးသည်။)
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, July 16, 2013 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
ဂျာမန်လိုလေး ကလေးလေး ဆိုထားတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။
အင်္ဂလိပ်စာသားလေးဖတ်ကြည့်တော့ ချစ်စရာ စိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းသွားပြန်ရော
I like to snap, it's my favorite game.
And because I'm snapping I don't get there very much.
I briefly bite into my dad's leg,
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, July 10, 2013 Labels: စုမီအောင်ရဲ့စာ, ညွှန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်
အောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခု၏တန်ဖိုး/စံ ကို ဘာနှင့်တိုင်းတာမလဲ။ မိမိကုမ္ပဏီမှာ ၀န်ထမ်းများပြားစွာခန့်ထားနိုင်ခြင်းလား၊ အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့်နေထိုင်သုံးစွဲလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းလား၊ လုပ်ငန်းတွေတစ်စတစ်စ တိုးချဲ့နိုင်ခြင်းလား။ မဟုတ်ပါ။ လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင် ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့်ရပ်တည်ဖို့လိုသလို၊ ၀န်ထမ်းများအပေါ် သမာသမတ်ကျကျ ဆက်ဆံအုပ်ချုပ်ဖို့ လိုသေးသည်။ ၀န်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းရှင်၏အားကိုးဖွယ်လက်ရုံးများ ဖြစ်ဖို့လိုသလို လုပ်ငန်းရှင်သည်လည်း ၀န်ထမ်းများ၏ အယုံကြည် အလေးစားခံ ပုဂိ်္ဂုလ် ဖြစ်နေရ မည်။ လုပ်ငန်းခွင်သည် ၀န်ထမ်းများအတွက် အကြောက်တရားနယ်ပယ်မဖြစ်စေရ။ ပျော်မွေ့သောစိတ်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သော နယ်ပယ် ဖြစ်ရမည်။ ခိုင်းနွားစက်ရုပ်လို အသေလုပ်၊ လကုန်လျှင် ငွေစက္ကူထည့်ထားသောအိတ် ပိုက်ပြီးအိမ်ပြန်၊ ထိုသို့သော ၀န်ထမ်း များဖြင့်သာလည်ပတ်နေသည့်လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကို အောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းဟု မဆိုနိုင်။
၀န်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုစတင်အလုပ်ခန့်သလဲ၊ ၀န်ထမ်းတွေကို ဘယ်လိုအလုပ်ထုတ်သလဲ . . ဆိုတာကလည်း အောင်မြင် သည့် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး၏ စံတန်ဖိုး/အရည်အသွေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သည်တန်ဖိုးကို“ရန်ဘင်ဟမ်”က ကျွန်မအား ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ချပြခဲ့သည်။
သူ့နာမည်က “ရန်ဘင်ဟမ်”။ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်ထုတ်ခံရမည့်ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်မှအသာတကြည်ထွက်ခွာသွားစေဖို့ ရှင်းလင်းပြောပြ နှစ်သိမ့်အားပေးရသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သို့သော် ၀န်ထမ်းတွေက မိမိအလုပ်ထုတ်ခံရပြီကို သိလျှင်သိချင်း ထိတ်လန့် ကြသည်၊ စိတ်လှုပ်ရှားကြသည်။ မယုံနိုင်သည့်မျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ကာ သူ့ကို မကျေမချမ်း မေးခွန်းထုတ်တတ်ကြသည်။
“အနှစ်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ် လုပ်ခဲ့တဲ့ရလဒ်က ဒါပဲလား” “ဘာကြောင့်ဒါမျိုးဖြစ်ရတာလဲ” “ဘယ်လိုပုံစံနဲ့အိမ်ပြန်ပြီး ငါအလုပ် ပြုတ်ပြီဟေ့လို့ အိမ်ကမိန်းမကို ဘယ်လိုပြောရမှာလဲ”
တချို့က စားပွဲပေါ်ကပစ္စည်းတွေ တွန်းတိုက်ချ၊ ထိုင်ခုံတွေ ကန်ကျောက်လှဲပစ်သည်အထိ ထင်ရာမြင်ရာတုံ့ပြန်သည်။ ရန်ဘင် ဟမ်ကမမှု။ ဘယ်လိုပဲတုံ့ပြန်တုံ့ပြန် သူနားလည်ရမည်။ ၀န်ထမ်းကို ချိုသာလေးစားစွာ ဆက်ပြောရတတ်သည်။
“အင်ပါယာတစ်ခုထူထောင်ခဲ့သူ၊ တိုင်းပြည်ကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်သူ၊ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခုခင်ဗျားရောက်နေတဲ့ နေရာမျိုးက နေ ဖြတ်သန်းဖူးခဲ့ကြတာချည်းပဲ။ ဒါ သူတို့မှာ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းတွေ အပြည့်ရှိလို့ပဲပေါ့”
သည်စကားက အလုပ်ထုတ်ခံရလို့ တုန်လှုပ်ထိခိုက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းအတွက် အားတက်စရာ။
“ဒီနေ့တော့အနားယူလိုက်၊ မနက်ဖြန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ ခင်ဗျားအလုပ်သစ်ရှာ၊ ပြီး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်းပြန်ဖြစ်အောင် ကြိုးစား၊ မပူနဲ့ သိပ်မကြာခင်ပဲ ခင်ဗျားအဆင်ပြေသွားမှာ”
သည်လိုပဲ သူပြောပြရတတ်သည်။ သည်နေ့တော့“စတိဗ်”ကို အလုပ်ထုတ်ကြောင်းသူပြောရဖို့ရှိသည်။ စတိဗ်က ထုံးစံအတိုင်း မျက်ခုံးပင့်ကာ သူ့ကိုမထီတရီကြည့်သည်။
နောက်ဆုံး ခေါင်းငိုက်စိုက်ချထွက်သွားတဲ့“စတိဗ်”ကို ကြည့်ကာ ရိုင်ယန်ခေါင်းညိတ်သည်။ ဒါပဲလေ။ ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့။ လက်ရှိ အလုပ်ကထွက်သွားရသည်နှင့်သူတို့ဘ၀တွေ အဆုံးသတ်ပြီလို့ ၀န်ထမ်းတွေက ထင်တတ်ကြသည်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ အစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာကို ဘယ်သူမှမသိ။ ဒါကို လူတိုင်းအားသိစေ့ချင်သည်။ စတိဗ်က သူ့ကို လှည့်ကြည့်ပြီး မေးသည်။ “ကျုပ်ခင်ဗျား ကို ဘယ်လိုတွေ့နိုင်မလဲ”တဲ့။ “ကီးကတ် လေးသာပေးခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် ခင်ဗျားကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်”
စတိဗ် သူ့စကားကို အဟုတ်ထင်သွားသလား။ ရန်ဘင်ဟမ် ခေါင်းယမ်းသည်။ စတိဗ်ကို သူ့အနေနှင့် နောက်ထပ်တွေ့စရာ အကြောင်း မရှိတော့ပါ။ စတိဗ်မှမဟုတ်။ ဘယ်ဝန်ထမ်းကိုမှ နောက်တစ်ကြိမ် တွေ့စရာအကြောင်းမရှိပါ။
ရန်ဘင်ဟမ်ဘယ်မှာနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်ဝန်ထမ်းမှ မသိ။ မနှစ်ကလည်း ၃၂၂ရက်လုံးလုံး လမ်းပေါ်မှာပဲ သူအချိန်ကုန် သည်။ သူ့နေရပ်က ဝေဟင်ထဲမှာ။ တစ်ချိန်လုံး လေယာဉ်ခရီးသွားနေရ သည်။ သူ့ကို သိချင် တွေ့ချင်လျှင် သူနှင့်အတူ ခရီးသွားမှရမည်။ အော်တိုမက်တစ်လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ စနစ်ကျတဲ့လည်ပတ်မှုတွေနဲ့ သူ့ဘ၀က အသက်ဝင်နေသည်။ နေရာအနှံ့ခရီးဆန့်ကာ ၀န်ထမ်းများ အတွက် ခွန်အားတက်ဖွယ် မက်ဆေ့ဂ်ျတွေပို့ချပေးရသည်။ Las Vegas က Goldquest မှာ မက်ဆေ့၈်ျပို့ချပေးဖို့ အကြောင်းကြားစာ ရောက်လာသည်။
“ခင်ဗျားရဲ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ဘာတွေရှိလဲ” ဆိုသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် သူ ပို့ချသည်။
ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးကို စားပွဲ ပေါ်တင်ကာ သူစကားစသည်။
“ခင်ဗျားတို့ဘ၀ဟာ ဘယ်လောက်လေးလံသလဲ၊ ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံးလွယ်ထားတယ်လို့ သဘောထားလိုက်ပါ။ ပခုံးပေါ်မှာ လွယ် ကြိုးသိုင်းထားပြီးတဲ့ခံစားမှုမျိုးပေါ့။ ဘယ်လိုလဲ ခံစားလို့ရရဲ့လား…(၀န်ထမ်းတွေကို သူတစ်ချက်စောင့်ကြည့်သည်)။ ခင်ဗျားတို့ ဘ၀ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အရာအားလုံး ထုပ်ပိုးကြည့်လိုက်ပါ။ ပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေ စပြီးထည့်ပါ။ အံဆွဲထဲက၊ စင်ပေါ်က တိုလီမိုလီ ပစ္စည်းလေးတွေ။ အလေးချိန်ကို စိတ်မှန်းနဲ့ခံစားကြည့်ပါ။ ပြီးရင် လေးတဲ့ပစ္စည်းတွေ လာမယ်။ အ၀တ်အစားတွေ၊ မီးအိမ်၊ စားပွဲ၊ တီဗီ . .ဘယ့်နှယ်လဲ ခင်ဗျားတို့ကျောပိုးအိတ် အတော့်ကိုလေးသွားပလား။ ပြီးရင် ဆက်ထည့်ဦးမယ်။ ထိုင်ခုံ၊ အိပ်ရာ၊ မီးဖိုချောင် ရှိရှိသမျှ အကုန် မော်တော်ကားလည်း ထပ်ထည့်လိုက်ပါဦး။ စတူဒီယိုခန်းနဲ့ အိပ်ခန်း နှစ်ခန်းတွဲပါတဲ့ခင်ဗျားအိမ်ကိုရော…. .အားလုံးကျောပိုး အိတ်ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျားပိုင်ဆိုင်သမျှအကုန်ထည့်ပြီးတာနဲ့ ခင်ဗျားလမ်းလျှောက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဘယ်လိုလဲ တော်တော်ခက်ခဲ သွားပြီမို့လား။ ပြောရရင် ဒါက ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်လုပ်နေကျ အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေပါ။ ကျုပ်တို့ ရွေ့လျားလို့လွယ်အောင် အလေးချိန်လျှော့နိုင်သမျှ လျှော့ချပစ်ရမယ်။ ပြီးတော့ အမှားမလုပ်မိစေနဲ့။ ရွေ့လျားမှုကလည်း နေထိုင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ။
ကဲ အခု အဲဒီကျောပိုးအိတ်ကို ရုတ်တရက်မီးလောင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေကို မီးမလောင်အောင် ထုတ်ထားချင် မှာပါလိမ့်။ ဓာတ်ပုံတွေလား။ ဓာတ်ပုံဆိုတာ အမှတ်သညာမရှိတဲ့ လူတွေအတွက်ပါ။ မကြိုးစားပါနဲ့။ လက်ဖက်ရည်လေးသောက်ပြီး ဓာတ်ပုံတွေမီးအလောင်ခံလိုက်ပါ။ ကျုပ်ပြောချင်တာက အားလုံးကို လောင်ကျွမ်းခံလိုက်ပြီး နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ ဘာမှမရှိဘဲ နိုးထ လာသလိုမျိုး စိတ်ကူးကြည့်ဖို့ပါပဲ။ ဘယ့်နှယ်လဲ ရင်ဖိုစရာကောင်းရဲ့မဟုတ်လား”
အဲသည်နောက် ဒဲလက်စ်ကို သွားရပြန်သည်။ အိုမားဟားကို ရောက်ရပြန်သည်။ တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားကြီး ရန်ဘင်ဟမ့် ရင်ထဲသို့ အဲလက်စ်ဆိုသည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မထင်မှတ်ဘဲဝင်လာသည်။ အဲလက်စ်က ချီကာဂိုမှာနေသူ။ ဖုန်းမက်ဆေ့ဂ်ျ အပြန်အလှန်ပို့ရင်း ခရီးသွား အစီအစဉ်ထဲမှာ ကြားညပ်ကာ သူတို့တွေ့ဆုံဖြစ်ကြသည်။
ရန်ဘင်ဟမ်ရုံးခန်း၏ စည်းဝေးခန်းမထဲ သူတို့အားလုံးရောက်ရှိနေသည်။
“စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအာလုးံး ရပ်ထားရမလို၊ အိမ်ဈေးကွက်က ရင်ခန်စရာမကောင်းဘူး။ အမေရိကရဲ့မှတ်တမ်းမှာ အဆိုးဆုံး အခြေ အနေဖြစ်နေပြီ။ ဒါကျုပ်တို့အတွက် အခွင့်အခါကောင်းပဲ။ ကော်နယ်က ငယ်ရွယ်ထက်မြက်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ဦး အသစ် ရောက်လာတယ်။ သူ့မှာ ကျုပ်တို့နဲ့အတူ စိန်ခေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ အကြံကောင်းတွေပါလာပုံပဲ”
“နက်တလီကင်နာ”ဆိုသည့်မိန်းကလေးက ဖျတ်လတ်စွာထ လာသည်။ သူမရဲ့ စိန်ခေါ်မှု စကားလုံးအသစ်ကို အားလုံးရှေ့မှာ ချပြလိုက်သည်။GLOCAL တဲ့။ Global နှင့် Localကို ပေါင်းစည်းထားသည့် စကားလုံးသစ်။ ဒီမိန်းကလေးက ရန်ဘင်ဟမ်ကို စိန်ခေါ်မည့် မိန်းကလေး။ တစ်နှစ်မှာ ရန်ဘင်ဟမ်အပါအ၀င် လူ၂၃ ယောက်ကို ခရီးသွားခိုင်းနေရခြင်းကို စရိတ်ကြီးသည်ဟု ထောက်ပြသည်။ ခရီးသွားအသုံးစရိတ်၏ ၈၅%သက်သာစေမည့်နည်းလမ်းသစ်တစ်ရပ် ချပြလာသည်။ ရန်ဘင်ဟမ်လို လေယာဉ်စီးခရီးသွားဖို့မလို၊ ရာသီဥတုကြောင့် အလုပ်နှောင့်နှေးရတာတွေ မရှိ၊ အလုပ်ထုတ်တော့မည့်ဝန်ထမ်းတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံ စကားပြောဖို့ မလိုတော့။ Glocal ဆိုသည့်စကားလုံးအတိုင်း အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးကာ အင်တာနက်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ကတစ်ဆင့် ကြိုဆို ရေးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတစ်ဦးကို ချက်ချင်း အလုပ်ထုတ်ပြသည်။ အားလုံးက ကျေနပ်စွာလက်ခုပ်တီးချီးမွမ်းကြသည်။ ရန်ဘင်ဟမ် ကတော့ အထင်မကြီး။ နည်းလမ်းသာကွဲပြားတာ ဖန်သားပြင်က တစ်ဆင့် ဒီမိန်းကလေးပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေက သူသုံးနေကျ စကားလုံးတွေ။ ရန်ဘင်ဟမ်က သဘောမတူ။
“ဒီလိုနည်းက မဖြစ်ဘူး။ ရက်စက်ရာကျလွန်းတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေ ဘ၀ပျက်ကုန်လိမ့်မယ်။ ကျုပ်လုပ်နေကျ နည်းလမ်းမှာ သိက္ခာတရားဆိုတာရှိသေးတယ်”
“ဘာထူးလဲ၊ နောက်ကျောကို ခိုးပြီးဓားနဲ့ထိုးမယ့်အစား ရင်ဘတ်ကို ဗြောင်ထိုးလိုက်တာ ဒါပဲလေ အတူတူပဲမို့လား”ဟု အချေပခံရသည်။
“မင်းက ငါ့လုပ်ရပ်ရဲ့အစစ်အမှန် အနှစ်သာရကို ဘာမှ မသိဘူး၊ မင်းရဲ့ i Chat က ဟုတ်လှပြီထင်ရပေမယ့် ဒီနည်းလမ်း ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ၀န်ထမ်းတွေ ဘယ်လိုခံစား၊ ဘယ်လိုစဉ်းစားတယ် ဆိုတာ မင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး”။
“စိတ်ပညာဆိုတာ အပိုတွေပါ” လို့ မိန်းကလေးကဆိုသည်။ ရန်ဘင်ဟမ်စိတ်ဆိုးသွားသည်။
“ကဲ ဒါဖြင့် မင်းငါ့ကို အလုပ်ထုတ်ပစ်ပြစမ်း” လို့စိန်ခေါ်လိုက်ကာ မျက်နှာချင်း ဆိုင် ထိုင်လိုက်ကြသည်။
“ကျွန်မစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောရတော့မယ်၊ ရှင့်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ်။ ကျွန်မရှင့်ကို အလုပ်ထုတ်ပါပြီ” ရန်ဘင်ဟမ်က မမှု။
“ငါ့ကို အလုပ်ထုတ်နိုင်တဲ့တစ်ယောက်တည်းသော သူက ဂရေ့စ်ဂရီဂိုရီပဲ သူနဲ့ငါသွားတွေ့မယ်” လို့ ဆင်ခြေပေးကာ အခန်းထဲ က ထွက်မည့်ဟန်ပြင်တော့ မိန်းကလေးက “မစ္စတာ ဒီလိုမရဘူး” ဆိုကာ သူ့နောက်က ထလိုက်လာသည်။ ရန်ဘင်ဟမ်က လက်ကာ ပြကာ တစ်ခွန်းပဲပြောလိုက်သည်။
“မင်းသုံးတဲ့နည်းလမ်းအရဆိုရင် မင်းက အခု ကွန်ပျူတာဖန်သား ပြင်မှာလေ။ လိုက်လာလို့မရဘူး။ ဒါကို မမေ့နဲ့”
နက်တလီကင်နာ လက်လျှော့ကာ နောက်တစ်ကြိမ် လုပ်ရသည်။
“ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ ငါ့ကိုအလုပ်ထုတ်မှာလဲ” လို့စောဒက တက်တော့ နက်တလီက အကြောင်းပြချက် အရေးမကြီးဘူး လို့ ပြောသည်။ “ဒါဆို အခြေအမြစ်မရှိဘဲ အလုပ်ထုတ်တဲ့သဘောဆိုတော့ ငါမင်းကို တရားစွဲမယ်” ရန်ဘင်ဟမ်ရဲ့ ပိုင်နိုင်စေ့စပ်မှု အောက်မှာ နက်တလီလက်လျှော့ရတော့သည်။
“ငါ့အလုပ်ကို နားမလည်ဘဲ လာမစွက်နဲ့။ ငါ့လုပ်ငန်းကို စွက်ဖက်တော်လှန်ဖို့မကြိုးစားခင် ငါဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ မင်း တကယ်နားလည်အောင် အရင်လုပ်လိုက်ဦး”
သည့်နောက်တော့ ရန်ဘင်ဟမ်ဘာလုပ်သည်ဆိုတာ သိနား လည်စေရန် ရန်ဘင်ဟမ်နှင့်အတူ ခရီးသွားဖို့ နက်တလီ ပြင်ရပြီ။
လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင် ရန်ဘင်ဟမ်က နက်တလီရဲ့ ကိုးရိုးကားရား ဆွဲနေရသည့်အိတ်ကြီးကို ပြောင်းခိုင်းသည်။ ဆွဲရတွန်းရ လွယ်ကူသည့်ဘီးလုံးတပ်လက်ဆွဲအိတ်ကိုပြောင်းထည့်ရသည်။ မလိုသည့်ပစ္စည်းတွေကို အသေးစိတ် အကုန်လျှော့ချပစ်ခိုင်းသည်။
“ဂိတ်တစ်ခုမှာတန်းစီတဲ့အခါ နို့စို့ကလေးပါတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်ရဲ့အနောက်က ဘယ်တော့မှမနေနဲ့”“လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ သက်ကြီး ရွယ်အိုတွေလည်း ရှောင်”။ ရန်ဘင်ဟမ်က သင်ခန်းစာကောင်းကောင်း ပေးသည်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ ရန်က ဘောပင်စာရွက်နှင့်မှတ်သားနေချိန် နက်တလီက လက်ပ်တော့ပ်တဖျောက်ဖျောက်နှင့်။ “အလုပ် ထုတ်ပစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကို သီအိုရီရေးဆွဲနေတာ”ဟု နက်တလီက ပြောသည်။ “ဘယ်သူ့အတွက်လဲ”ရန်က မေးသည်။ “သီအိုရီ အရ ရေးဆွဲထားတာမို့ ဘယ်သူ့လက်ထဲမဆို ထည့်ပေးလို့ရတဲ့နည်းပဲ။ အဆင့်တိုင်း အတိအကျလိုက်နာဖို့တော့လိုမယ်” နက်တလီက ယုံကြည်မှုလွန်ကဲဟန်ဖြင့်ဖြေသည်။
“အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့အခါ လူတွေ စိတ်ဒဏ်ရာဖြစ်တယ်။ ဒီလိုလူတွေကို ငါတို့က မျှော်လင့်ချက်ရောင်နီသမ်းတဲ့နေရာအထိ ပို့ပေးရမှာ။ မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်ကို ပို့ပေးပြီး အတိုးအလျှော့လုပ်ပေးရုံ ကလေးပဲ မဟုတ်ဘူး။ လှေကို ရပ်။ သူတို့ကို ရေထဲချပေးပြီး ရေ ကူး သွားနိုင်တဲ့အထိ လုပ်ပေးရမှာ”
စိန့်လူးဝစ်ကို ရောက်ပြီ။ သူတို့အလုပ်ထုတ်ရမည့်သူက မြေးနှစ်ယောက်ရှိသည့်အဘိုးတစ်ဦး။ စိတ်မကောင်းစရာ။ ကလေးနှစ် ယောက်ဓာတ်ပုံထုတ်ပြကာ “သူတို့ကို ဘာစကားပြောဖို့ ခင်ဗျားဘယ်လိုအကြံပေးမလဲ”ရန်ကို မေးသည်။ ရန်က ဖြည်းဖြည်းပြောသည်။
“အားကစားသမားတွေကို ကလေးတွေ ဘာလို့သဘောကျတာလဲသိလား….သူတို့စိတ်ကူးတွေနောက်ကို လိုက်ပေးနိုင်လို့ပဲ”
“ဒီကုမ္ပဏီမှာအလုပ်မလုပ်လည်း သူတို့စိတ်ကူးတွေနောက်ကို ခင်ဗျားလိုက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ လူတိုင်းကုမ်္ပဏီမှာ အလုပ် လုပ်ကြတာပဲလို့ မထင်ပါနဲ့။ စားဖိုခန်းတွေထဲမှာ အလုပ်လုပ် တဲ့စားဖိုမှူး ကောင်းတွေအများကြီးရှိတာပဲ၊ ပြင်သစ်အစားအစာ ချက်နည်း ခင်ဗျားတတ်တာပဲ။ ခင်ဗျားမှာအခွင့်အလမ်းတစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ဒါက ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းပဲ။ ခင်ဗျားအတွက မဟုတ်ရင်တောင် ကလေးတွေအတွက်လို့ သဘောထားပြီး ကြိုးစားလိုက်ပါဦး”
လူကြီးလက်ခံနိုင်သည်အထိ နူးညံ့ပြတ်သားစွာ အလုပ်ထုတ် စကားပြောပြနေသည့်ရန်ကို နက်တလီက အားကျစွာငေး ကြည့်ရပြီ။
အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို နက်တလီ အလုပ်ထုတ်ရသည်။ အမျိုးသမီးက အမူအရာတည်ငြိမ်လှသည်။ နက်တလီ့စကားများကို ဆင်ခြေမတက်ဘဲ အလွယ်တကူလက်ခံသည်။ “ကျွန်မရိပ်မိပြီးသား။နားဝင်ချိုအောင် လုပ်မနေပါနဲ့၊ လိုရင်းပဲပြော၊ လခသုံးလစာ၊ ခြောက် လစာဆေးကုသခွင်..”ဟုတ်ပြီ။ နက်တလီက ဒီအမျိုးသမီးကို အောင်မြင်စွာ အလုပ်ထုတ်နိုင်မည်ဟု မိမိကိုယ်ကို အထင်ရောက်သည်။ သို့သော် တည်ငြိမ်စွာပြောလိုက်သည့် အမျိုးသမီး၏စကားလုံးများကြောင့် နက်တလီ ချုံးချုံးကျသွားသည်။
“ကျွန်မအိမ်နားမှာ သိပ်လှတဲ့တံတားတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီကအပြန် အဲဒီအပေါ်ကနေ ခုန်ချလိုက်ရုံပေါ့”တဲ့။
နက်တလီငိုရပြီ။ ရန်ဘင်ဟမ်က နှစ်သိမ့်သည်။ “သူတကယ် မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ ခံစားချက်ကို မီးထိုးပေးသလိုဖြစ်သွားလို့ ဒီလိုပေါက်ကရ ပြောတာပါ။ ငါ့အလုပ်က ဒါပဲ။ လူတွေရဲ့ခိုင်ခံ့မာကျောမှုမရှိတဲ့အပိုင်းကို ကောက်ယူပြီး ဝေးဝေးလွှင့်ပစ်နိုင်အောင် စီမံပေးတာပဲ။ အခု မင်းသိပြီမို့လား”
Kansas City မှာ နက်တလီ့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံရပြီ။ အလုပ်ထုတ်ပစ်လိုက်သည့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ တုံ့ပြန်ပုံက ဖရိုဖရဲ။ “ဒီလိုမျိုးမမျှော်လင့်ထားဘူး” “ပေးဆပ်ခဲ့ရတာနဲ့မထိုက်တန်ဘူး” “မနက်ဖြန်အိပ်ရာက နိုးရင် ဘာလုပ်ရမှန်းသိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး” “စိတ်ပျက်တယ် ကျွန်မထက်ပိုတော်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောက်လာဖို့ နည်းလမ်းရသွားတာပေါ့” တချို့ကခပ်ရွဲ့ရွဲ့တုံ့ပြန်သည်။ Detroit က၀န် ထမ်းတွေက အဆိုးဆုံးပဲဖြစ်သည်။
ဟောပြောပွဲခန်းမထဲ ရန်ဘင်ဟမ်ဝင်လာသည်။ ထုံးစံအတိုင်း ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးနှင့်။
“ဒီတစ်ခါတော့ ကျောပိုးအိတ်ထဲ လူတွေဖြည့်ကြည့်ရအောင်။ အသိအကျွမ်းတွေစထည့်မယ်။ ရုံးပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေ တွေ၊ လျှို့ဝှက်ကိစ္စတွေမှာ တိုင်ပင်နေကျအရင်းနှီးဆုံးတွေ၊ ၀မ်းကွဲ၊ ဦးလေး၊ အဒေါ်။ ညီအစ်ကိုညီအစ်မ မိဘတွေ၊ ဇနီးခင်ပွန်းတွေ။ ထည့်လိုက်ပြီ။ ကဲ ဘယ်လောက်လေးမယ်ထင်လဲ။ အလေးချိန်ကို စိတ်မှန်းနဲ့ခံစားကြည့်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုဟာ ဘ၀မှာ အလေးလံဆုံးအပိုင်းတွေပါပဲ။ စေ့စပ်မှု၊ အငြင်းအခုံ၊ လျှို့ဝှက်မှု၊ အပေးအယူ.. အားလုံးပဲ ဒီအထဲ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအလေးချိန်တွေ အားလုံး ခင်ဗျား သယ်စရာမလိုပါဘူး။ အိတ်ကိုပြန်ချထားလိုက်ပါ။ ဒါတွေက အချင်းချင်း သယ်ဆောင်မှာပါ”
ရန်ဘင်ဟမ်၏ဟောပြောပွဲစပြီ။ ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံးပုံကို ပရိုဂျက်တာကြီးက လည်ပတ်ပြသနေသည်။
“မနှစ်က ကျုပ်မိုင်ပေါင်း သုံးသိန်းငါးသောင်းခရီးထွက်ခဲ့တယ်။ ရက်ပေါင်း နှစ်ရာ့ရှစ်ဆယ်။ ခင်ဗျားတို့ကျောပိုးအိတ်တစ်လုံး လွယ်တယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ဘ၀မှာရှိသမျှအရာအားလုံးနဲ့ ဒီအိတ်ကိုထုပ်ပိုးစေချင်ပါတယ်။ ပေါ့ပါးတဲ့အရာတွေက စလို့လေးလံတဲ့…”။ ရန်ဘင်ဟမ်ရှေ့ဆက်မပြောနိုင်တော့။ အဲလက်စ်ကို ထူးကဲစွာ သတိရသည်။ ခန်းမထဲက ထွက်ပြေးကာ အဲလက်စ်ရှိ ရာ ချီကာဂိုသို့ လိုက်သည်။ အိမ်ရှေ့ရောက်လျှင် လူခေါ်ခေါင်းလောင်း နှိပ်သည်။ အဲလက်စ်ကဖွင့်ကြည့်သည်။ ဟနေသည့်တံခါးကနေ ကလေးတချို့ပြေးဆော့နေသည်ကို သူမြင်လိုက်သည်။ အဲလက်စ်ကျောဘက်မှ “ဘယ်သူပါလိမ့်”ဟု ယောက်ျားတစ်ယောက်၏မေးသံ။ အဲလက်စ်က “အော် အိမ်မှားတာပါ”ဆိုကာ တံခါးပြန်ပိတ်သွားသည်။ အဝေးကနေ အပြေးလာသူကို ထီးထီးကြီးမြင်ပါလျက် အိမ်မှား တာလို့ ညာပြောရသည့် အဲလက်စ်အခြေအနေကို သူနားလည်ပေးရမည်။ နောက်ဆုံးတော့လည်း သူ့ဘ၀က ကျောပိုးအိတ် အလွတ် တစ်လုံးနဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွား။ နက်တလီကတော့ အလုပ်ထွက်သွားပြီ။ နက်တလီနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတွေက သူ့ကို ၀ိုင်းမေးကြသည်။
“နက်တလီ အလုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး မှတ်မိလား။ ၀ီချီတာမှာ ၀န်ထမ်းသုံးဆယ် လျှော့တဲ့အထဲပါတယ်လေ။ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေသွားပြီ။ တံတားပေါ်က ခုန်ချသွားတာ”
“ကျုပ်ကတော့ ဘယ်သူ့မှ မမှတ်မိဘူး။ ကျုပ်အလုပ်ထုတ်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေတောင်မှ အများကြီးပဲ”
ရန်ဘင်ဟမ်က ခိုင်မာစွာ ပြောလိုက်သည်။
ယနေ့မှာ လေယာဉ်ခရီး မိုင် ၁၀သန်းရှိခဲ့သည့်ခရီးသည်ကို ဂုဏ်ပြုပါကြောင်း လေယာဉ်မယ်ကကြေညာသည်။ ကပ္ပတိန်က ရန်ဘင်ဟမ့်ဘေးခုံမှာလာထိုင်ကာ ချစ်ခင်စွာစကားဆိုသည်။
“မိုင် ၁၀သန်းခရီးပေါက်ဖို့ ခင်ဗျားက ငယ်နေသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်တော့ထင်မိတာပဲ”တဲ့။ “ခင်ဗျားက ဘယ်ကလဲ”လို့ ကပ္ပတိန်ကမေးလိုက်သေးသည်။ ရန်ဘင်ဟမ်က ပြတင်းကလှမ်းမြင်နေရသည့် လေယာဉ်တောင်ပံတစ်ဖက်ဆီ ငေးရီရီကြည့်ကာ ဖြေသည်။
“ကျွန်တော်လား.. ကျွန်တော်က ဒီကပါပဲ”
သူဆိုလိုတာက သူဟာ ဝေဟင်ထဲကလူ။
ရန်ဘင်ဟမ်က ကျောပိုးအိတ်ထဲ တစ်ခုပြီးတစ်ခုထည့်ကာ ကျွန်မအား ဘ၀နေထိုင်နည်းအသစ်တွေ ပြသခဲ့သည်။ သို့ပေမယ့် သူ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာတော့ ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေသလားပဲလို့ ကျွန်မစောဒက တက်ချင်မိသည်။ သူပြောခဲ့တဲ့စကားအတိုင်းပဲပေါ့။ “ရွေ့လျားမှုကလည်း နေထိုင်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ၊ ဒီတော့ကာ ကျုပ်တို့ရွေ့လျားလို့လွယ်အောင် ၊ ခရီးများများပေါက်အောင် ကျုပ်တို့ကျော ပေါ်ကအလေးချိန်တွေကို လျှော့နိုင်သမျှ လျှော့ချပစ်ရမယ်”တဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း သူ့ခရီးက မိုင် ၁၀သန်းပေါက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်မည်။ ကျွန်မအတွက်တော့ မိုင်၁၀သန်းဝေဟင်ခရီးမဆိုထားနှင့်၊ မိုင်တစ်သန်း မြေပြင်ခရီးတောင် ပေါက်နိုင်ဦးမည်မထင်ပါ။ ကျွန်မ၏ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ လျှော့ချပစ်လို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေရှိနေသည်။ လူတချို့၊ စာအုပ်တချို့နှင့် အိပ်မက်တချို့ . .။
ရှင်တို့ရဲ့ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာရော ဘာတွေရှိသလဲ။ ဘာတွေထည့်ဖို့လိုတယ်လို့ သဲသဲကွဲကွဲမသိသေးခင်မှာတော့ အလွတ် အတိုင်း သူ့ချည်းသက်သက်ထားတာက ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။ တစ်ခုတော့မှာချင်သည်။ ကျောပိုးအိတ်ကို မီးမလောင်ပါစေနှင့်။ ။
(Family Magazine, July, 2013)
Movie - Up In The Air(American Drama)
Cast - George Clooney(Ryan Bingham)
Kyle Davidson (Alex)
Miranda Presley (Netalie Kinea)